Ngijabule, uhlelo lokusebenza oluguqula ubuhle bezinwele ze-Afrikhepri - Afrikhepri Fondation
ngoLwesibili, Januwari 19, 2021
Ngijabule, uhlelo lokusebenza oluguqula ubuhle bezinwele ze-Afro
Emasontweni ambalwa, lo mqondo uzokwethulwa futhi sesivele sibikezela ibhokisi eligcwele lalesi sicelo elizoguqula ubuhle bezinwele ze-Afro. Iphrojekthi Umphakathi, NAppyme ivumela abesifazane base-Afro, base-Afro-Caribbean nabase-Afrika nabamaMelika ukuthi baxhumane kalula, bashintshane ngezinsizakalo zokulungisa izinwele nezinye izindlela zokwelapha ubuhle. Ngemuva kwalo mqondo, iqembu losomabhizinisi abasha base-Afrika abasungula lo mbono ogqamile. Inani alilindeli inani leminyaka! Ukuqinisekiswa ngale phrojekthi!
I-ORIGIN OF PROJECT
Ukuqala kwamanabukeni, ngemuva kokusungula ukusetshenziswa kwegama elifanayo, kwasungulwa yithimba lentsha yase-Afrika elihlala eParis kanye neziqu zezikole ezinkulu zaseFrance nezobunjiniyela. Kusebenze iminyaka eminingana endaweni yaseParis neyaseYurophu yokuqalisa ubuchwepheshe, bawazi kahle umphakathi ababhekiswe kuwo kanye nezinkinga zabo ngobuhle.
Ukuphendula inkinga emibili.
Endaweni ebukeka ishintshe kancane maqondana nokunikezwa, abesifazane base-Afro babelana nobunzima obufanayo ekutholeni umuntu okwazi ukunikeza izinwele zakhe ngosizo abalulindele. Abacwali bezinwele abaningi, abaqeqeshiwe noma abazifundisayo, ngasikhathi sinye bafuna ukuba nokwazi kwabo kubonakale ebuhleni bezinwele ze-Afro. Isicelo mobile nappyme ivumela xhuma ama-afros abesifazane abafuna ukuba izinwele zabo zenziwe (kodwa futhi ukwakheka, i-manicure, njll) nalabo abaqaphela lokhu.
Isihluthulelo izinsizakalo ezisezingeni ekhaya, In umoya onobungane futhi izindleko eziphansi kwabanye, indlela ukuze baziwa futhi uqaphele abanye.
Isicelo se-nappyme asikho ngaphansi ukuguqulwa kweqiniso embonini yebuhle be-afro. Ehlukile emakethe ekhulayo futhi ngokuvumelana ngokuphelele nezidingo eziveziwe zabesifazane abathintekayo, insizakalo eyinikezayo ivuselela ngokulusizo: ubuchwepheshe bedijithali, manje obukhona yonke indawo emphakathini wethu, ekugcineni busiza nobuhle be-Afro.
I-revolution iyasebenza, faka i-Nappy mina!
Labo abanentshisekelo bangase babe amalungu omphakathi we-nappyme futhi bajabulele izinzuzo zenethiwekhi ngokubhalisa ku-inthanethi www.nappyme.com
Uhlelo lokusebenza lweselula luyoba, ngokwengxenye yalo, ngokusemthethweni evuliwe emavikini ambalwa. Abantu asebevele babhalisile kusayithi bazokwazi ukuyisebenzisa ekuhloleni kuqala. Uma ukwethulwa kuhlelwe eParis, a ukuthunyelwa okuqhubekayo eYurophu, e-United States nase-Afrika uzosungula ngemva kwalokho.
ange@nappyme.com - 06 16 86 92 01 -iwebhusayithi- Facebook - Ama-Credits wezithombe: I-Nappyme
Qhubeka nokufunda i-athikili
Buka uhambo lwamantombazane (2018)
Lokho u-Amma Akutshela Umhlaba - Izimfundiso zeSage yanamuhla (Audio)
Usomabhizinisi wase-Afrika-waseMelika wenza ama-sneakers abomvu abomvu bokuqala
Iziphakamiso ze-8 zikaPaul Rabhi zokuhlala zizinakekela impilo
Igayidi enhle yamafutha abalulekile - Alessandra Moro Buronzo (PDF)